ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ကျုံးသွင်းခံရသော ဆင်ကြီးတကောင်
nga paw.. this is written4u... သမိုင်းတဖြတ်အမြင်နဲ့ လူတတ်မလုပ်ချင်ပါနဲ့ တိုင်းပြည်အနာဂါတ် အရေးမို့ပါ
nga paw.. r u still anti-pap and pro-opp in SG?
let me tell u.. u have too much hatred and u r anti-establishment..
how many ppl aldy told u that?
The current dialogue is to make or mar our destiny. too early to say.
Very good post. NLD should think carefully before making decision for Party Registration.
ဒီဆောင်းပါးရေးသူဟာ ကိုဇော်ဝင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုပေါပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးခွင့်ရှိပါတယ်။ သူ့အမြင်ကို ခင်ဗျားတို့မကြိုက်လို့ တင်ပြခွင့်မရှိဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားတို့လဲ အာဏာရှင်ပါပဲ။ ကျနော်က ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရေးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ထောက်ခံပါတယ်။ ဒေါ်စုကလွဲပြီး တခြားခေါင်းဆောင်တွေ အရွေးခံတာကိုလဲ ရာနှုန်းပြည့်ထောက်ခံပါတယ်။ ဒေါ်စုကတော့ လွှတ်တော်ထဲကော၊ အစိုးရအဖွဲ့ထဲကော မ၀င်သင့်ပါဘူး။ ပါတီခေါင်းဆောင်နေရာကပဲ ကြိုးကိုင်စေချင်ပါတယ်။ ဒေါ်စုမှာ မပြေးသော် ကန်ရာရှိ တဲ့၊ နိုင်ငံခြားသားနဲ့လက်ထပ်ထားမှု၊ ဖားတပိုင်း ငါးတပိုင်း မိသားစု ရှိနေမှုစတဲ့ အချက်တွေကြောင့် သားသမီးဝတ်ကို တာဝန်ယူတဲ့အနေနဲ့ကော ယနေ့ခေတ်လို နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ပိုမိုလက်ထပ်လာကြတဲ့အချိန်မှာ စံပြအနေနဲ့ ဒီအမတ်လုပ်ရေး၊ အစိုးရခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရေးအခွင့်အလန်းလောက်ကိုတော့ စွန့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် မြန်မာပြည်မှာ သားသမီးဝတ်ကို မသင်ကြားဖို့နဲ့ ပိဋကတ်ထဲကပါ ထုတ်ပယ်ပစ်ဖို့ လုပ်သင့်တယ်လို့ မြင်ကြောင်းပါခင်ဗျား။ မိကောင်းဖခင်သားသမီးလို့ မခံယူနိုင်သူများလဲ ဆဲချင်ရင် ဆဲနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
Nyunt Shwe, please make yourself clear about parent duty. Beingapolitical leader doesn't necessarily need to be very dutiful parent like you think to show as role model for people. For the country, for the people, for the better purpose, we have to scarify those duties. Please consider Buddha (HE even left his son and wife). Your comment is totally irrelevant with the topic.
Ko Paw, I don’t know you personally but I indirectly know you well via your blog, our activities in SG. In my view, I prefer your own post rather than sharing others’ post. I would like to read the originality of your post. As an activist like you should not do “Monkey business” for the sake of your regular blog reader like me who respect you and your post, and also participated together with you in political activities in SG during 2007 & 2008. Hope you understand my point.
အင်မတန် နှစ်ခြိုက်၍ သဘောချင်းလည်း တိုက်ဆိုင်လှသည့်အလျောက် ကူးယူဖော်ပြအပ်ပါသည်။.......
သြော် ငပေါ... ငပေါ.... သူမသေခင် နာမည်သေရှာပြီ။
မိုးမခ ဆောင်းပါးက ကောင်းပါသည်။ သို့သော် အရေးကြီး ဆုံးအချက်က မှားနေပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲသုံးနေရာ ပြိုင် ရမည်ဆိုသော ကန့်သတ်ချက်ကို ဖျက်မပေးပါ။ အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ မစ္ဈိမလည်း တောက်လျောက် မှားရေးနေပါသည်။
if God give u chance, you will become the worst dictator mankind has ever experienced..
so many people have voiced out against your stupid ideas.. and you can't stop preaching it...
if u r notastupid radical dictator, who else will...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်မှာ သူရဲကောင်းပေါ်နေပါပြီ။ မသိကြလို့ ပါ။
ဒါကတော့ နာမည်ကြီး ငပေါပါ။
သူ့ မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရလာရင် ဗမာပြည် နူလာကနေ ၀ဲစွဲ လာပါလိမ့်မယ်။
To Ko Zaw Win and Ko Paw, Thanks for showing your concerns about Myanmar's future. I am sure we all have the same common goal for Myanmar - that is to buildapeaceful, prosperous and democratic Myanmar that respects human rights of all its people. To achieve that NLD and all democratic forces:
1. Must build capabilities and institutionalize their governance, leadership development and grass-roots building activities
2. Work constructively with key stakeholders to create conditions on the ground that will impact positively to the livelihood of people (poverty reduction, education, health, economic development etc.)
Once the above two things happen and gain momentum, moving Myanmar to democracy will be much easier.
For that reason, I prefer NLD to register the party and avoid another round of conflicts that will result in lose-lose situation for everyone. If another round of confrontations and conflicts happens, the people who suffer the most will be people of Myanmar. I don't want to see that happens and I hope you don't want to see that either.
Thank you Ko Zaw Win for fruitful data and critics rather than blunt agitating to Daw Su and NLD.
Professional Politician Mg Suu San said for 21 Century politics:
နိုင်ငံရေးကို စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာ တချို့က အုပ်စိုးတဲ့လူရဲ့ intention ကို အဓိကထားတယ်။ တချို့က ခေတ်ကာလ မှာ လွှမ်းမိုးတဲ့ အယူအဆ၊ အိုင်ဒီယာတွေ၊ Ideology ကို အဓိကထား စဉ်းစားတယ်။ တချို့က personality လူပုဂ္ဂိုလ်ကို အဓိကထားစဉ်းစားတယ်။ reality ပကတိအခြေအနေကို အဓိကစဉ်းစားတာ ရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ reality ကို အဓိကထား စဉ်းစားတာမျိုးပဲ ကျန်မယ်။
အခု ခေတ်က ideology ၀ါဒတွေ ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေ မရှိဘူး။ သမိုင်းရဲ့ လမ်းညွှန်မှု၊ သမိုင်းလိုအပ်ချက်အရ ဆိုတာတွေ မရှိဘူး။
sober politic လုပ်ရမယ်။ အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင် လေးလေးနက်နက် သုံးသပ်မှုတွေနဲ့၊ creativity နဲ့ လုပ်ရမယ်။ လုပ်တဲ့အခါ ပကတိအခြေအနေ reality အပေါ် better analysis မှန်မှန် ကန်ကန် သုံးသပ်ပြီးနဲ့ better prediction of future အနာဂတ် ကို ပိုပြီးမှန်ကန်အောင်တွက်ပြီး လုပ်တတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ The Art of Prediction လို့ ဆိုတာပဲ။
My points by common outlook;
Bo Than Shwe retreats with defence strategy left best defender Bo Thein Sein seem to be soft-liner, key transformer of transitional period, till oblige to generals.
NLD will re-register and undertake bi-election realized on to seize the majority in 2nd term election 2014.
The great elephant retreatafoot step for accelerated forward movement.
Similar to Ko Paw said, let inland NLD know " Trust Daw Su's capability, honesty and bow down to NLD prolonged withstands.
အင်မတန် နှစ်ခြိုက်၍ သဘောချင်းလည်း တိုက်ဆိုင်လှသည့်အလျောက် ကူးယူဖော်ပြအပ်ပါသည်။...
That isagood article. Most commentators are criticized on personal not on articles. It makes me deep sorrow. I want to seeathoughtful counter comments.
သောက်ပေါကို သောက်ပေါက ထောက်ခံနေပြန်ပါပီ။
“ရီတာတယောက် တယ်လဲ မျက်စိသျှမ်းသကိုး။ “အိုးပင်းဂေါက်” လို့ သူ(ဘိုဘိုလန်းစင်) ထင်တဲ့ လူရဲ့ စာကို သူဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ပါ့မလားခင်ဗျ။ ကျနော်တော့ ဖတ်ရင်းနဲ့ အဲသည်နေရာရောက်တော့ ချက်ချင်း သတိထားမိပြီး တယောက်တည်း ရယ်လိုက်ရတာ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း မဒမ်ပေါကို ဖတ်ပြရင်းနဲ့ ရယ်ကြရသေးတယ်။
ကျနော့်မှာတော့မှန်ဘီလူးမရှိဘူးဗျိုး။ ဆေးတံနဲ့ ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဆိုတော့ ဦးရှံစားနဲ့ မှားပြီး လာငှားနေမှာ စိုးလို့။
အဲ့ဒါ ဘိုဘိုလန်းစင်ဆိုတဲ့ အရင် ဧရာဝတီမှာ ဆောင်းပါးရေးနေတဲ့ တစ်ယောက်ပါ။ သူရယ် သူရိန်ကျော်ဇော် (၀တုတ်) ရယ် ကိုပေါ ခေါ် (အောင်နိုင်မိုး) ရယ်က တစ်အုပ်စုပါ။ ဒေါက်တာဇာနည်နဲ့ ဘိုဘိုတို့နဲ့ အလွမ်းသင့်တယ်။ ပြောရရင်တော့ ဘိုဘိုလန်းစင်ဆိုတာ လူထု ဦးလှရဲ့ မြေး၊ သူရိန်ကျော်ဇော်ဆိုတာ ကွန်မြူနစ်ပါတီက ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောရဲ့မြေး၊ နှစ်ကောင်စလုံး ဒေါ်စုရဲ့ စကောလားရှစ်နဲ့ အင်္ဂလန်မှာ ကျောင်းတက်ပီး လူဖြစ်လာတဲ့ ကောင်တွေ၊ ဒေါ်စုကို ဝေဖန်တာ နှစ်ယောက်မရှိ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကိုတောင် အသေစောလို့၊ သက်ရှိထင်ရှားသား ရှိနေရင် တစ်ခြားနိုင်ငံက စစ်အာဏာရှင်တွေလိုပဲ သိက္ခာဆိုတာ တစ်ပြားသားမှ မရှိပါဘူး ဆိုပီး ပြောနေတာ အဲ့ကောင်တွေလေ... ဝေဖန်တယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အရိပ်ကို ခိုလှုံပြီး အတင်းတုတ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး စော်ကားနေကြတာ... ခွေးလောက်တောင်မှ ကျေးဇူးသိတတ်မှုမရှိတဲ့ကောင်တွေ။ သူတော်ခြင်းခြင်း သတင်းလွေ့လွေ့ ပေါင်းဖက်ကြလိမ့်မယ်.... ဒီလိုကောင်တွေမှ သူတို့ပြောသလိုမလုပ်လို့ ပြည်သူကို ရန်ရှာနေတဲ့ ခွေးရူးတွေပဲ။
ဒီကောင်တွေ ဘာအဖြစ်မှ ရှိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး..
သူတို့ ဘာပဲရေး လူတွေမှာ လက်ခံသင့်လား လက်မခံသင့်လား စဉ်းစားဥာဏ်ရှိတယ်။ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေနဲ့irrawaddy blog မှာ vote လုပ်တဲ့ result တွေ ကြည့်ရင် ဒီကောင်တွေလုပ်တာ အရာမရောက်မှန်း အသိသာကြီးပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုပ်ရပ် ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်တယ်လို့ ကိုယ်ဘာကိုယ် လက်ခံလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ အရင် စော်ကားခဲ့တာတွေ တောင်းပန်ဖို့မရှက်တတ်ပါစေနဲ့ ။
ထောင် မ ပြော နဲ့ ဘာ မ ဟုတ် တဲ့ စ လုံး PR လေး လက် လွှတ် သွား ပြီး မိန်း မ ငြို ညင် မှာ စိုး လို့ သံ ရုံး ရှေ့ တောင် ဖြတ် မ လျှောက် ရဲ တဲ့ သူ က ကျ မ တို့ ခေါင်း ဆောင် ကို ဟို လို လုပ် ပါ ဒီ လို လုပ် ပါ နဲ့ | မှန် တယ် ထင် ရင် လုပ် ချင် ရင် ပြည် တော် ပြန် လုပ် လေ|ဘ ဝ တွေ ပေး ပြီးထောင် ကျ နေ တဲ့ လူ တွေ ကို လဲ ရှက် ပါ အုန်း|
ခါင်းဆောင်ကြီးကို စိတ်နှင့်တောင့် မပြစ်မှားကြနဲ့။ သူပြောသမျှ ဘာမှ မဝေဖန်ဘဲ နောက်က တိတ်တိတ်လိုက်ကြ။ ကင်မ်ဂျောင်အီနဲ့ တနေ့တခြား ပိုပိုတူလာပြီ။ နောက်လိုက်တွေက ပိုဆိုးသေးတယ်။ မမြင်မတူသူကို ဖမ်းပြီး လက်သည်းခွံခွာချင်တဲ့ ကင်ပေတိုင်စိတ်ဓါတ်နဲ့။ ထောင်ကျဖူးမှ ခေါင်းဆောင်ကို ဝေဖန်ရမယ်ဆိုတာလည်း အံ့ဖွယ်သုတပါပဲ။
သူများတွေ ဘယ်လိုသွားနေလဲ ကြည့်စရာလား။ မြန်မာ့အမျိုးသားရေးစရိုက်လက်ခဏာတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စည်းကမ်းရှိသော ဒီမိုကရေစီနဲ့သွားမယ်လို့ ဒယ်ဒီက ပြောပြီးသား။ မာမီကလည်း ယောက်နောက်ဆံထုံးပါဆိုသလို ဖေကြီးသဘောတဲ့။ သားသမီးတွေတိတ်တိတ်နေကြ၊ ဒါပဲ။
ကိုပေါနှင့် အမြင်ခြင်းတူလှ သဖြင့် share လိုက်ပါသည်။
ကိုပေါ.. အန်တီစုနဲ့ ဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံကြပြီး ရက်ပေါင်း ၉၀ကျော်အကြာမှာ မြန်မာနိုင်ငံရေး ဘာတွေတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာ တကယ်မမြင်တာလား မသိချင်ယောင်ပဲဆောင်နေတာလား၊ တကယ်မသိလောက်အောင် တုံးလွန်းအားကြီးလို့ ကိုပေါလို့ပဲ နံမည်တွင်နေတာလားဆိုတာတော့ ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျားပဲ သိမှာပါ။ ပြည်သူတွေကို ကိုယ့်အကြိုက်လမ်းစဉ်လိုက်ခိုင်းမယ့်အစား ပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာစေမယ့် ပြည်သူ့စိတ်ကြိုက် ပြည်သူနဲ့တသားထဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ အတိတ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တည်မှုပေါ် အခြေခံပြီး အနာဂတ်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့်လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ခြင်းသာအမှန်ကန်ဆုံးလမ်းလို့ယူဆပါတယ်။ ခု NLD လျှောက်နေတဲ့လမ်းဟာ ဒီနေ့ဒီအချိန်အတွက်တော့ ခေတ်အမှီဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုလို့ ယူဆကြောင်းပါ။ :)
PRESIDENT OBAMA:Yet after years of darkness, we've seen flickers of progress in these last several weeks. President Thein Sein and the Burmese Parliament have taken important steps on the path toward reform.
But today, we've decided to take this step to respond to the positive developments in Burma and to clearly demonstrate America's commitment to the future of an extraordinary country,acourageous people, and universal values.
Nga paw Says :ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသိန်းစိန် ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲပြီးလို့ ယခု ရက်ပေါင်း 92 ရက် တိတိကြာခဲ့ပါပြီ။
Nga paw : u r not normal person. U can be compared with Obama. :D
(Nga paw Says :ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသိန်းစိန် ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲပြီးလို့ ယခု ရက်ပေါင်း 92 ရက် တိတိကြာခဲ့ပါပြီ။)
ငပေါ က အိမ်မှာနေ အရက်ကလေးသောက်လိုက် မိန်းမနဲ့ နှပ်လိုက် လုပ်နေပြီး အားလို့ယားလို့ရေးထားကို ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့ ။
You seem to be occupied bashing Daw Su and you also areasupporter of
Bengali Rohingyas. See below:
Genocide of Native Buddhist Rakhines in Maungdaw By Bengali aliens
ပေါ.ဗျာ ။ စေတနာမှန်တဲ.ဆရာတို.ဆု
သိပ်လည်းစွေ့ စွ့ မခုန်ပါနဲ.ဗျာ။
ခင်ဗျားတို့ ကတော့ ပြည်သူတစ်ရပ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၇ဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်းမမြင်နိုင်သေးတဲ့ လူတွေကို မြင်၇၊ သိ၇၊ ကြား၇တော့ကိုလိုနီခေတ်ကို ပြန်မြင်ယောင်စေပါတယ်။ ဗိုလ်ချူပ်က ဂျပန်နဲ့ပေါင်းလိုက်၊ English နဲ့ပေါင်းလိုက် လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပြီး လိုချင်တာကို ၇အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်က သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းက စပြီး၊ Dr. ဘမော် မကျန် အကုန်လုံးက ၀ိုင်း၇ှပ်ချ၊ အပြစ်တင်ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျမှသာ လွတ်လပ်ေ၇းဖခင် ဆိုပြီးတန်ဖိုးသိလာတာပါ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ ခင်ဗျားတို့လူပိန်းတွေထက် ပိုမြင်နိုင်(ခဲ့)တယ် ဆိုတာ ဘယ်သမိုင်းကို လှန်လှန်တွေ့၇မှာပါ။ မှန်ခြင်း၊ မှားခြင်းကို သမိုင်းဆိုတဲ့ (အချိန်) နဲ့ ၇လဒ် ကသာ အဆုံးအဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်း)
'ကိုအေးလွင်တို့လို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဖွင့် ပေးဖို့ တောင်းဆို ပေးသူတွေ ကိုတောင်မှ မျက်နှာသာ မပေး ကိုလည်း သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ NDF အခု ဘာဖြစ် နေသလဲ ဆိုတာ ကိုလည်း ကြည့်ဖို့ လိုပါမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ခဲ့တဲ့ NDF ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်တဲ့ NLD လောက်တောင် နိုင်ငံရေး လုပ်ခွင့်ရပါရဲ့လား။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ NDF ကို ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်တဲ့ NLD လောက် တောင်မှ'
Faulty logic! No one cares who is
Ko Aung Lwin or candidates of NDF,
NLD is NLD because of Daw Su and
U Tin Oo. NLD less Daw Su and U Tin Oo will be just another party
so that logic is faulty.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသိန်းစိန် ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲပြီးလို့ ယခု ရက်ပေါင်း 99 ရက် တိတိကြာခဲ့ပါပြီ။
Paw Gyi ! Nyein Hla par lar kwa
မိန်းမနဲ့ နှပ် tar ma o thae lo htin pa yea.. dar ma mah hot.. nga paw pa sat ma arr aung thu min ma ka ho ha sote khaing tar tae htin tae.. :D
Lote Par Ohm Kwa !
Only you can save Myanmar People under Military Government. You will be only one Great Leader of Myanmar.Dont scare your wife. Let go and shout in front of Myanmar Embassy "
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသိန်းစိန် ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲပြီးလို့ ယခု ရက်ပေါင်း 99 ရက် တိတိကြာခဲ့ပါပြီ။ "
Harrr Harrrr Harrrr :D